မတ်လ 2017 |5၏စာမျက်နှာ 88 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 5)
Transvideo နှင့် Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်များအတွက် NAB 2017 မှာနယူးထုတ်ကုန်
Transvideo - ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် Transvideo နှင့် Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များအတွက် Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာကြေညာချက် Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်တဲ C2661 နှင့်အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အ NAB 7046 မှာ Transvideo Intl တဲ C2017, ပြပွဲဧပြီလ 22-27 အဖြစ်ကတခြားပြခန်းအပေါ်ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ် အောက်ကစာသားထဲမှာစာရင်း။ ပူးတွဲ 300 dpi ဓါတ်ပုံ: 1) Transvideo ရဲ့အသစ် StarliteRF-တစ်မော်နီတာ-အသံဖမ်း ...
Las Vegas, NAB ပြရန် 2017, Booth N5924: ယနေ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ငါးကြက်တံခွန် Technologies က, ထုတ်လွှင့်ကြော်ငြာသွင်းနည်းပညာရှေ့ဆောင်တစ်ဦး, အများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်နှင့်စီမံခန့်ခွဲကြောင်း, တံတားဒစ်ဂျစ်တယ်တစ်ဦးအမေရိကန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းထားပါတယ် မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်း။ အဆိုပါမဟာမိတ်ငါးကြက်တံခွန်က၎င်း၏ကျယ်ပြန့်များအတွက်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားကိုထောကျပံ့ကူညီကြလိမ့်မည် ...
Jolt ကျွန်မရဲ့ကားက၎င်း၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအခြေစိုက်စခန်းအပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Paywizard ရွေးကောက်
Paywizard, စာရင်းသွင်းထားသော, ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM) အထူးကု, ယနေ့ကြောင့်ကျွန်မရဲ့ကား Jolt ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, high-လည်ပတ်ဒိုင်ခွက်ကင်မရာသို့စမတ်ဖုန်းလှည့်သောပလက်ဖောင်း၏ဖန်တီးသူ, ကသေချာဖို့ Paywizard သွက်လက်ပလက်ဖောင်းသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်တော်မူပြီရှိပါတယ် ရှေ့ဆက်မယ့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူဆက်ဆံရေးကျော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိန်းချုပ်မှု။ Paywizard အဘို့, Jolt ကျွန်မရဲ့ကားသဘောတူညီချက်တီဗီ၎င်း၏ရိုးရာ core ကို, ဗီဒီယို-On-demand ကျော်လွန်ယင်း၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ရန်၎င်း၏မဟာဗျူဟာအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြု ...
AutoCAD အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ပေး Audio Visual ရေးအဖွဲ့
ရာထူး: AutoCAD အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ပေး Audio Visual ရေးအဖွဲ့ကုမ္ပဏီ: တစ်ခုမှာလုပ်ငန်းခွင်တည်နေရာ: လုပ်ငန်းခွင်အသံများအတွက်စနစ်တကျနှင့်ထောက်ခံရေးဆွဲဖန်တီးခြင်းအတွက်၎င်း၏နည်းပညာရေးအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ဖို့ AutoCAD အင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှာကြံနေပါတယ် Santa Clara, CA အမေရိကန် Santa Clara,, CA ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် / ရာထူးအကျဉ်းချုပ်တစ်ဦးက, ဗီဒီယို, Conferencing များနှင့်ကွန်ယက်စနစ်ဖြေရှင်းနည်းများ။ နည်းစနစ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရေးဆွဲတဲ့အစိုင်အခဲနားလည်မှုပိုင်ဆိုင် ...
ရာထူး: နည်းပညာဆိုင်ရာဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Airbiquity Inc ကတည်နေရာ: ဆီယက်တဲလ် WA အမေရိကန်ဒါကဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုများမှနေ့ပါဝင်သည်ပေမယ့်ကန့်သတ်မထား: ဒေတာစင်တာအနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုရည်မှတ် Airbiquity ဖောက်သည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထုတ်ယူခြင်းလက်မှတ်တွေ, နှင့်သက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့သောမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီးစနစ်များကို။ ဒီအနေအထားအစိုင်အခဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းလိုအပ်ပါတယ် ...
ရာထူး: နည်းပညာဆိုင်ရာဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Airbiquity Inc မှတည်နေရာ: ဆီယက်တဲလ် WA အမေရိကန် Thisis ဖောက်သည်တစ်ဦးထောက်ခံကြောင်းအနေအထား။ တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုများမှနေ့ပါဝင်သည်ပေမယ် notlimited မှနေသောခေါင်းစဉ်: Hardware နဲ့တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်အတွက် softwarelocated, နှင့်ဒေတာစင်တာ systemsin အခြေစိုက်သက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့သောမိုဃ်းတိမ်ကိုရည်မှတ် Airbiquity ဖောက်သည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Processingtickets ။ Thisposition အစိုင်အခဲနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသို့ deepdive နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းလိုအပ်ပါတယ် ...
IoT ပလက်ဖောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆိုက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော
ရာထူး: IoT ပလက်ဖောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဆိုက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီ: Verizon ကတည်နေရာ: Verizon ကသိသိသာသာမတ်စီးတီးအားဖွင့်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားရဲ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့မစ်ရှင်ပေါ်မှာ Sunnyvale, CA အမေရိကန်တာဝန်များ။ Verizon ရဲ့ထုတ်ကုန်နည်းပညာ stack ဟာ့ဒ်ဝဲ, ခေတ်သစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို stack, API ကို, အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ကျက်ဖြတ်ပြီးအထိချဲ့ကာ။ ပူဇော်သက္ကာကိုစမတ်ဗီဒီယိုမှစမတ် Lighting ကိုဖြတ်ပြီးအထိချဲ့ကာ - ယာဉ်အသွားအလာ, ကားရပ်ရန်နှင့်အများကြီး ...
Leica Thalia: Big ရုပ်ပုံရုပ်ရှင်အသစ်မှန်ဘီလူး
Wetzlar, ဂျာမနီ - မတ်လ 28, 2017 - ဇာတ်ကောင်-မောင်းနှင်, ကြီးမားတဲ့-format ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်တိုးမြှင့်လိုအပ်မှပြန်ကြားခြင်း, CW Sonderoptic ချုပ်မှန်ဘီလူး၏ Leica Thalia စီးရီးမိတ်ဆက်။9အလင်းဆုံမှန်ဘီလူး၏ set ကိုတစ်ဦးတသမတ်တည်းကြည့်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင် ARRI Alexa 60, VistaVision နှင့်စူပါ 65 ရုပ်ရှင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံများကိုဖုံးခြင်းနှင့်တဆင့်ခံစားမိရာထောင့်ဖြတ် 35mm ၏ပုံရိပ်တစ်ခုစက်ဝိုင်း, ပေးပါသည် ...
5 ၏စာမျက်နှာ 88«ပထမဦးစွာ...«34567 » 102030...နောက်ဆုံး»